कृषि मन्त्रालय खारेज ? | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय कृषि मन्त्रालय खारेज ?
on: २८ माघ २०७५, सोमबार ०६:०७ सम्पादकीय
कृषि मन्त्रालय खारेज ?
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कृषि मन्त्रालयले किसानको हितमा काम नगरेको भन्दै मन्त्रालय नै खारेज गर्न माग गरे । कृषिका लागि छुट्याइएको बजेट किसानकै नाममा १८ प्रतिशत र विभिन्न तामझाममा ८२ प्रतिशत खर्च हुने गरेको भन्दै उनले मन्त्रालयको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाए । सांसद त्रिपाठीको आशय भने कृषि मन्त्रालय खारेज नै गर्ने भन्ने नभएर यसको उपादेयतामाथि व्यंग्य गर्नु हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, यो मन्त्रालय तलबभत्ता खाने र प्रशासनिक तहहरू खडा खरेर शब्दको खेतीमा रमाउने मन्त्रालय बनेको भने सबैले बुझेकै हो । त्यसैले कृषि मन्त्रालयलाई अहिलेको भन्दा सानो बनाई त्यसैबाट कृषि विकासका कामहरू गराउनेतर्फ लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
अनुसन्धानकै लागि कर्मचारी पाल्नुभन्दा मन्त्रालयले आवश्यक देखेको विषयमा विज्ञहरूलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रले कुनै अनुसन्धान गर्न खोज्यो भने त्यसमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा बजारीकरण लगायत काम गर्न कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा तथा प्रविधि, योजना तथा विकास समन्वय, कृषि तथा पशु व्यवसाय प्रवर्द्धन, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास र पशु स्वास्थ्य महाशाखा छन् । यी महाशाखाभित्र पनि अनेक शाखा र विभाग छन् । सबैभन्दा बढी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी भएको तथा बढी बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयमा पर्छ कृषि मन्त्रालय । यसभित्र सबैजसो खेतीबालीका बारेमा विभागहरू छन् । तर, नेपालको कृषि उत्पादकत्व र उत्पादन केही बढे पनि अन्य देशको दाँजोमा त्यति बढ्न सकेको छैन । त्यसैले नेपाली कृषि उपज आयातितभन्दा महँगो हुन्छ । यसमा अरू देशले दिने अनुदान मात्र कारण होइन । अनुसन्धान, मलबीउ अनुदान आदि उपलब्ध गराउँदा पनि नेपालको कृषि उत्पादकत्व कम हुनु पछाडिको कारण मन्त्रालयको कार्यशैली नै हो ।
सरकारले जुनजुन कृषिबालीमा प्रत्यक्ष लगानी कम गरेको छ ती बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व भने धानको दाँजोमा चित्त बुझ्दो छ । त्यसैले मन्त्रालय आफ्नो मूल काममा असफल देखिन्छ । त्यसो हुँदा यतिका धेरै जनशक्तिलाई पालेर कृषिका लागि विनियोजन गरिएको ८० प्रतिशत बजेट सिध्याउनुभन्दा प्रभावविहीन सबै विभाग र शाखाहरू खारेज गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने धेरै बजेट अनुसन्धान, तिनको प्रसार र प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने क्षेत्रमा खर्च गर्न र निजीक्षेत्रलाई सहयोग दिन सकिन्छ । यो बढी प्रभावकारी हुन्छ किनभने यसमा खर्च गर्ने निजीक्षेत्र हुन्छ र त्यसको अनुगमन गर्ने काम मात्रै सरकार वा मन्त्रालयको हुन्छ । विकसित देशमा कृषि मन्त्रालय रहन्छ त तर उसले तथ्यांक राख्ने र अनुसन्धान परियोजनाहरू सञ्चालन गराउनेमै आफूलाई सीमित गर्छ । अनुसन्धानकै लागि कर्मचारी पाल्नुभन्दा मन्त्रालयले आवश्यक देखेको विषयमा विज्ञहरूलाई अनुसन्धान गर्न दिइन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रले कुनै अनुसन्धान गर्न खोज्यो भने त्यसमा पनि मन्त्रालयले सहयोग गर्छ । आफूलाई आवश्यक विज्ञहरूलाई निश्चि परियोजनाका लागि मात्र अनुबन्ध गर्ने भएकाले मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च निकै कम हुन्छ । त्यस्तै अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धि निजीक्षेत्रलाई उपयोग गर्ने बाटो खुला गरिन्छ ।
नेपालका अनुसन्धान संस्थाहरूले पनि अनुसन्धानको उपलब्धिलाई प्रसार गर्न बन्देज लगाएको अवस्थासमेत छ । गोलभेंडा विशेषज्ञले पत्ता लगाएको नयाँ बीउ प्रयोग गर्न नदिएकाले अवकाश पछि त्यो बीउ प्रयोग गरेर कृषि वैज्ञानिकले त्यसको फाइदा लिएका छन् । यो एउटा उदाहरण हो : सरकारी निकाय आफै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बाधक छन् भन्नका लागि । सांसद त्रिपाठीले व्यंग्य गरेरे भनेको भए पनि वास्तवमा कृषि मन्त्रालयको संरचना नै गलत छ, कार्यशैली नै बेठीक छ । त्यसलाई सुधार्न यसका अनेक विभागहरू खारेज गरेर छिटोछरितो संयन्त्र बनाउने हो भने कृृषिका लागि निकै काम गर्न सकिन्छ ।
आप्रवासीमाथि ट्रम्पको प्रतिबन्ध अदालतद्वारा खारेज
७ पुष २०७५, शनिबार १७:१२